‘जनादेश पाएको नेकपा खारेज भयो, त्यसैले कांग्रेसले केही समय सरकार चलाएर चुनाव गराउनुपर्छ’
नेपाली पब्लिक आइतबार, चैत ८, २०७७
संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा सत्तारुढ दलकै नेताहरू सडकमा उत्रिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सडक आन्दोलन गरेर असंवैधानिक कदमको विरोध गर्‍यो। सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना परेपछि नेपालको राजनीति सोचेजति सहज भएन। सर्वोच्चले अर्को फैसला सुनायो फागुन २३ गते। जुन फैसलाले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरिदियो। अहिले संसदमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका राजनीतिक दल छन्। यही परिप्रेक्षमा अबको कांग्रेसको रणनीति, सरकार गठन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनका विषयमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता गगन थापासँग गरिएको कुराकानीः
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीभित्र एक किसिमको संकट आयो। जसको कारण देश नै संकटमा पर्न गएको छ। देशलाई संकटबाट माथि उकास्न नेपाली कांग्रेस कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ?
–संसद् पुनर्स्थापना भएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुवै घटकले नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिदिनुहोस् भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो। हामीले २ कारणले गर्दा यसमा अग्रसरता नलिने भन्यौं। एउटा नेकपासँग संसद् ६४ प्रतिशत मत छ। तपाईहरुले सरकार चलाउने म्याण्डेड पाउनुभएको हो। हामीले प्रतिपक्षमा बस्ने म्याण्डेड पाएका हौं। राजनीतिक कारणले पनि यो गलत हुन्छ। अर्कोे कुरा रणनीतिक कारणले पनि गलत हुन्छ किनभने हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बदलिनुपर्छ भन्ने चाहना राख्थ्यौं। जुन स्वाभाविक पनि हो। असंवैधानिक कदम चालेर अघि बढ्न खोज्नुभएको प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर सामना गर्न पाउनुहुन्न, सक्नुहुन्न भन्ने कुरा थियो। तर, अदालतको फैसलाले नेकपा नै रहेन। सरकार चलाउने म्याण्डेड पाएको पार्टी नै नरहेपछि यसले राजनीतिक परिदृश्य नै बदलिदियो। अब कोहीसँग नि बहुमत छैन। नेकपा छैन, एमाले र माओवादी भयो, र उहाँहरुले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो। अहिलेको अवस्थामा हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बदल्न चाहन्छौं। र, देशलाई सम्हालेर निर्वाचनमा लिएर जान चाहन्छौं। प्रधानमन्त्री ओलीको निरन्तरता रहेमा उहाँले थप संवैधानिक अन्यौलता सिर्जना गर्दै लैजानुहुन्छ। र, फेयर निर्वाचन पनि गराउनु हुन्न। आफ्नो पार्टीको आफ्नो सहकर्मीसँग त यति असहिष्णु प्रधानमन्त्रीले आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अरु राजनीतिक दलमाथि कहीँ कतै सहिष्णुता राख्नुहुन्न। त्यसकारण अब कांग्रेसले अग्रसरता लिएर आफ्नो नेतृत्वमा एमालेभन्दा बाहेक अरु पार्टीलाई मिलाएर सरकार बनाउने र उचित समयमा देशलाई चुनावमा लैजानुपर्छ। देशमा चुनावबाट नयाँ म्याण्डेड प्राप्त गर्ने अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। यसकै लागि हामी अहिले जनता समाजवादी पार्टी, माओवादीसँग छलफल गरिरहेका छौं।
जाँतोलाई भन्दा हाँतोलाई खसखस भनेजस्तै तपाईहरूलाई सत्तामा जानै हतारो भइरहेको छ भन्ने आरोप पनि छ। नेपाली कांग्रेसले उक्त भूमिका निर्वाह गर्न आफैमा लडिरहेका कम्युनिष्ट पार्टीले त्यो अवस्था बनाइदिएका छैनन्। प्रचण्डले ओलीलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले कसरी त्यस्तो भूमिका खेल्नसक्छ?
–माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने भन्ने कुरा त समर्थन फिर्ता लिने हो कि अर्कोतिरबाट तिमीहरुको समर्थन मैले छोडिदिए भनेर कसले पहिले भन्ला भन्ने मात्र छ। मुख्य कुरा, जनता समाजवादी पार्टीले यो कुरामा आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा हो। नेकपा ओली र प्रचण्ड पक्षमा विभाजित भएका बेला कांग्रेसले सरकारमा जान्छु भन्नु गलत हुन्थ्यो। तर, अहिले कांग्रेस सुतेर बस्न भएन। कि त प्रधानमन्त्री ओली जिन्दावाद भनेर तपाई नै चलाउनुहोस् तपाईबाहेक कोही छैन भन्नुपर्‍यो। माता पनि तपाई, पिता पनि तपाई हो, तपाईबाहेक कसले सक्छ, र माओवादी केन्द्रलाई समर्थन मै राख्नुस्, जसपालाई नि लिनुस्, सबै मिलाएर २ वर्ष चलाउनुस्, चुनाव गराउनुस्, भन्ने हो कि सिधैँ। अस्तिसम्म प्रधानमन्त्री बदल्थे कि माधवकुमार नेपालले बदल्थे कि प्रचण्डले बदल्थे। त्यही दलले बदल्थे। तर, अब बल्ल प्रधानमन्त्री बदल्ने कुरा हाम्रो पोल्टामा आयो। गणितीय हिसाबले आइसक्यो हामीले प्रयास गरेपछि नबदलिने हो अब त। कांग्रेसले जसपा र माओवादी केन्द्रलाई बोलाएर सरकार बदल्ने कुरामा म नेतृत्व गर्छु, तपाईहरुले मलाई मद्दत गर्नुपर्छ भनेपछि जसपा र माओवादी त्यसैअनुसार सोच्न थाल्ने हो। हामी बुढानिलकण्ठमा सुतेर बस्यौं, ठीक भएन। कांग्रेस चुप लागेर बस्यो भने जसपालाई त यो फेरि तपाईले भनेजस्तो जाँतोलाई भन्दा हाँतोलाई खसखस भनेजस्तो हुन्छ। जहाँसम्म मेरो व्यक्तिगत कुरा छ, नेपाल कांग्रेसले सरकार निर्माण गर्दैगर्दा त्यहाँ मन्त्री बन्ने न मेरो चाहना छ न मैले गएर काम गर्छु। मैले पार्टीको फोरममा काम गरिरहेको छु, मैले सांसद् भएर काम गरिरहेको छु। कांग्रेसको हित केमा हुन्छ, त्यही हेर्ने हो। त्यससँगै यो सिस्टम कहाँबाट जोगिन्छ, हेर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको निरन्तरता भनेको प्रहरी, प्रशासन, अड्डा, अदालत हामी देखिरहेका छौं नि के भइरहेको छ भनेर। अहिले यो सरकारलाई ब्रेक नलगाउने हो भने यी जोडिएका तन्तुहरु खस्किँदै जान्छ। त्यसको मलतब नेपालमा सबै चुनाव फेक हुने भयो कम्बोडियाको जस्तो। निर्वाचन आयोग खल्तीको, राष्ट्रपति खल्तीको, अड्डा खल्तीको अनि अदालत खल्तीको हुन थाल्यो भने के हुन्छ हालत? त्यसकारण रोक्नुपर्छ भनेको हो।
अहिले पनि संसदको ठूलो दल त नेकपा नै हो। एमालेमा ह्वीपले काम गर्ला। यस्तो परिस्थितिमा ओलीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर वा कुनै विधिबाट हटाउन सक्ने सम्भावना बन्छ?
–ओलीको बहिर्मगन भनेको नेकपा एमाले बाहेकका दलको बहुमत पुर्‍याउने मात्र हो। नेकपा एक रहेका बेला त्यो बेला ओलीको बहिर्गमन नेकपाभित्रबाट मात्र हुन सक्थ्यो। प्रचण्ड, माधव नेपालले संसदीय दलको नेता फेर्ने संख्या पुर्‍याउन सकेको अवस्थामा ओलीलाई फेर्नुहुन्थ्यो, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुहुन्थ्यो, र हटाउनुहुन्थ्यो। हामीले चाहेर भने केही हुँदैनथ्यो त्यो बेलामा। त्यही भएर हामीले सत्तामा जानेतिर कुरै नगरौं हामीसँग नम्बर नै छैन भनेका थियौं। अहिलेको बहिर्गमन एमालेबाट हुँदैन। माधव नेपालले हटाएर ओली हट्नुहुन्छ, र अहिले?
एकातिर नेपाली कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्‍यो भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। अर्कोतिर, आफ्ना मन्त्रीहरू ओलीजीसँग टाँसिरहनुभएको छ। उहाँहरूलाई प्रचण्डले कारबाही गर्न सक्नुभएको छैन। प्रचण्डजीसँग भएका सांसद्को संख्या घट्ने स्थिति त्यहाँ छ। यस्तो परिस्थितिमा कांग्रेसले सरकार चलाउने कस्तो आत्मविश्वास बोकेको हो?
–माओवादी केन्द्रको कसरी क्याल्कुलेट गरेको छ, त्यो उहाँहरूलाई थाहा होला। रातारात ओली र प्रचण्डको समीकरण भए पनि केही भएन। हामीले मोहले सरकार चलाउँछौं भनेको होइन। मानौं, अहिले जसपा नै सरकारमा गयो भने ठिक छ निश्चित होस् जाओस्, चलाउन् सरकार। राजनीतिक दलले के ठिक छ, त्यसको इफोर्ट नलगाउने हो, आफ्नो कर्म न गर्ने हो। बाँकी रहेका कुरा त हाम्रो हातमा छैन नि। यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई बदल्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको कुरा ठिक हो नि त। गतवर्षको वैशाखमा नै हामीले प्रधानमन्त्री ओलीको शासन गर्ने वैधता सकियो भनेका थियौं। हामीले गर्न त केही सक्दैनौं। ओली बहुमतका साथ शानदार तरिकाले बस्नुभएको थियो। संसद् विघटन गर्नुभयो, असंवैधानिक भन्यौं, लडाइँ लड्यौं, संसद् आयो। सकियो। नेकपा एउटै भएका बेला प्रचण्ड–नेपालले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नुभयो। नेकपाभित्र रहेर सहयोग गर्ने भनेका बेला कांग्रेसले दौडेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न गएको भए सकिन्थ्यौं नि त हामी। हामीले ठीक निर्णय गर्यौं। तपाईहरु पहिले प्रष्ट हुनुस् कुन पार्टीको हो। जबसम्म नेकपाको विवाद समाप्त हुँदैन तबसम्म कांग्रेसले केही गर्दैन भनेका थियौं। अहिले त त्यो सकियो। एमाले एउटा छ, माओवादी अर्को छ। एमालेसँग बहुमत छैन, उसले कोही न कोहीसँग मिलेर सरकार चलाउनुपर्छ। सामान्य अवस्था हो भने हामीले ऊ ठूलो पार्टी हो बहुमत पुर्‍याउँछ भने पुर्‍याओस् सरकार चलाओस् भन्थ्यौं, प्रतिपक्षमा बस्थ्यौं। हामी प्रधानमन्त्री ओलीले फेयर चुनाव गराउनुहुन्न, उहाँको नियत ठिक छैन। उहाँको कार्यशैलीले अब २ वर्ष उहाँले सरकार चलाउनु भनेको देश अझ कमजोर बनाउने देखाइसकेको छ। यो बेला हामीले गर्नुपर्ने कर्म भनेको ओलीको सरकार हटाएर अर्को सरकार बनाउने प्रयास गर्ने हो। गर्दैगर्दा सकिएन भने त्यतिबेलाको कर्म के हो त्यही गर्ने हो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति ओलीप्रति नरम हुनुहुन्छ पनि भन्ने गरिन्छ। भोलि सत्ता समीकरण बनाउने खेलमा कांग्रेस नै विभाजित होला कि आशंका पैदा भएको छ। त्यस्तो अवस्था होला कि नहोला?
–हुँदैन। नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो बैठक सभापतिको नेतृत्वमा शीर्ष नेताहरुसहित बसेका थियौं। त्यसमा जसपा, माओवादी केन्द्रसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेका थियौं। उहाँहरु अहिले संवादमा हुनुहुन्छ। यो बेला उपयुक्त कुरा भनेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर ओलीलाई बिदा गर्छौं, र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्छौं भनेर निर्णय गर्नुपर्ने हो। यस्तो हुन नसकेका कारण शंका गर्ने ठाउँहरु उत्पन्न भएका हुन्। तर, हाम्रो घरभित्र बसेर ओलीजीसँग माया प्रिती लगाउने मन छ भने त्यो मनभित्र सकिन्छ। आजसम्म कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारमा जाने वा ओलीसँग सहकार्य गर्ने भन्ने सहमति भएको छैन। र, त्यो सहमति कसैले गराउन सक्दैन।
बहुमत प्राप्त नेकपाभित्र त त्यस्तो भाँडभैलो भयो। त्यही भएर कांग्रेसमा पनि त्यस्तै अवस्था आउने हो कि भन्ने आशंका छ नि!
–त्यस्तो हुँदैन। कांग्रेसभित्र पनि नेताहरुको आ–आफ्नो धारणा छ। सर्वोच्चको फैसलापछि पनि देखियो। तर, त्यो खालको स्थिति रहँदैन।
यो गतिरोधको स्थिति कांग्रेसले सम्हाल्ने वातावरण कहिलेसम्म तयार होला? यो वातावरण कसले बनाउने हो?
–त्यो वातावरण हामीले बनाउने हो। हामीले अहिले औपचारिक अनौपचारिक रुपमा निरन्तर संवादमा छौं। माओवादी केन्द्र यो विषयमा प्रतिबद्ध छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँहरुसँग अर्को ठाउँ पनि छैन। जहाँसम्म ओलीसँग रहेका मन्त्रीहरुको कारबाहीको कुरा छ त्यो उहाँहरुको कुरा हो।
समीकरणका लागि त प्रचण्डजीको कुरा के हो भन्ने त जरुरी छ होला नि?
–उहाँहरु के गर्दै हुनुहुन्छ भन्नेतिर म धेरै जाँदिनँ। मलाई के विश्वास छ भने कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भयौं भनेको दिन माओवादी केन्द्र त्यो ठाउँमा आउने स्थिति छ।
सत्ता समीकरणमा अघि बढ्ने र नेतृत्व लिने कुरा कांग्रेसको रहर हो कि बाध्यता?
–राजनीतिक दलले रुन्चे कुरा गर्नुहुन्न, यो रहर वा बाध्यता हैन हाम्रो कर्तव्य हो।
अहिले जनता नेपाली कांग्रेसले के गरोस् भन्ने चाहन्छन्? जनताको मनस्थिति बुझ्नुभएको छ?
–जनता के चाहन्छन् भन्ने कुरा मलाई जे राम्रो लाग्छ त्यही चाहन्छन् भन्छु, अर्कोले आफूलाई जे राम्रो लाग्छ त्यही चाहन्छन् भन्छन्। मुख्य कुरा आफूले गर्ने निर्णयको औचित्यलाई पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। बहुमत पाएको नेकपा खोई अहिले? जनादेश जसले पाएको ऊ नै छैन अहिले। नेकपा सकिएको दिन त प्रधानमन्त्री र उहाँको कम्पनीले लोकलाजका लागि भए पनि २–४ दिन रोनाधोना गर्नुपर्ने हो नि। उहाँहरुले बनाएको पार्टी हो नि। अदालतले नमागेको कुरा गर्‍यो भन्नुपर्ने हो नि। तर, उता त नाचगान, रमिता छ। नेकपा सकिएको दिन सबैभन्दा बढी खुशी नेकपा बनाउनेले मनाएको छ। नेकपा मर्‍यो भनेको छ हाँसेको छ। शोक गीत पो गाउने हो नि त। लोक गीत हो त? अर्कोथरि फेरि नेकपा सकियो भनेको दिन न्यायिक पुनरावेदन जानु नि, लडाइँ लड्नु, छैन। यसको मतलब नेकपा वैधानिक रुपमा सकियो, तुहियो भन्ने हो। अब नेपाली कांग्रेसले मैले सरकार चलाउने जनादेश पाएको होइन। तर, जनादेश पाएको पार्टी मर्‍यो, त्यसैले यो बेला मैले अब यो जिम्मा लिएँ भन्नुपर्‍यो। केही समय सरकार चलाएर चुनाव गराउँछु, र त्यसबाट प्राप्त मतका आधारमा देशको शासन सत्ताअघि बढ्छ भन्ने कांग्रेसको धारणा हो।
३ वर्ष प्रतिपक्षमा बस्नुभयो। यसबीचमा नेपालको राजनीति र संसदीय अभ्यासबारे राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कस्तो सन्देश गयो?
–निर्वाचनपछि ५ वर्ष सरकार चलाउन जनमत पाएको पार्टीले सरकार चलाइरहेको थियो। हामी प्रतिपक्षमा बस्यौं। उसले शासकीय जिम्मेवारी र हामीले प्रतिपक्षीय जिम्मेवारी भनेको जस्तो गर्न नसके पनि जेनतेन ५ वर्ष चलाउनुपर्थ्यो। यसले राम्रो सन्देश जान्थ्यो। हामीले मौका पाए पनि जिम्मेवारी सम्हाल्न नसकेपछि यसले हामी संविधान र यो व्यवस्था सम्हाल्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने प्रश्न उब्जिएका छन्। प्रतिपक्षमा कांग्रेस कतिको खरो उत्रियो यसको छुट्टै समीक्षा गरौंला। तर, अहिलेको अवस्था हामीले सिर्जना गरेका होइनौं। यो स्थिति नेकपाले आफूले पाएको जिम्मेवारी थेग्न नसकेर भएको हो।
राष्ट्र संकटमा गयो भनेर जनतामा निराशा पनि छाएको छ। जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नुभएन। तपाईहरु चिन्ता नगर्नुहोस् हामीहरु छौं। हामी चलाउँछौं। देशलाई चुनावमा लिएर जान्छौं। बहुमत माग्छौं। हामीलाई बहुमत दिनुपर्ने आधारहरु यो–यो हुन् भनेर जनतासामु जान्छौं। जनताले दिएको मतको आधारमा के गर्नुपर्ने हो गर्छौं। अस्ति सर्वोच्चले चुनाव गर्ने निर्णय सदर गरिदिएको भए ठूलो दुर्घटना हुने थियो। त्यो चुनाव हुने थिएन। त्यसैले अब प्रतिपक्षी भए पनि अब सरकारको नेतृत्व केही समय गरेर देशलाई चुनावमा लैजान्छौं।
त्यो चुनाव नहुने आधारहरु के–के हुन्?
–देशलाई चुनावमा लैजाने प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको डिजाइनमा माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डलाई सडकमा थन्काएर त्यो शक्तिलाई चुनावमा भाग लिनै नदिने थियो। उहाँहरुलाई राजनीतिक दल र पार्टी नै नदिएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जस्तो चुनाव गराउने उहाँको प्लान थियो। त्यसले देशलाई मुठभेडतिर लिएर जान्थ्यो।
ओली अहिले पनि जब्बर बनिराख्नुभएको छ। उहाँलाई विस्थापित गर्न सजिलो छ?
–किन नहुनु? हामीले संख्या पुर्‍याएमा उहाँले के गर्नुहुन्छ? लड्नुहुन्छ? भिँड्नुहुन्छ? हामीले जसपा र माओवादी केन्द्रलाई मिलाएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी पास गरेमा के गर्नुहुन्छ उहाँ? सरासर बालकोट नगएर के गर्नुहुन्छ?
सरकार टिकाउन अन्य विधिहरु छन् मसँग भन्नुहुन्छ केपी ओली।
–तर्साउने काम गर्नुभएन। गर्नेचाँहि के हो? सबैले यही मूलको पानी खाएको हो। सबै राजीनतिक दलहरु हामीभित्रबाट उदाएका हुन् नि।
कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था बनेमा को बन्छ अबको प्रधानमन्त्री?
–आजसम्मको स्थितिमा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता पार्टी सभापति हुनुहुन्छ। कांग्रेसले सरकार चलाउने अवस्था आउँदा स्वाभाविक रुपमा संसदीय दलको नेता बन्नुहुन्छ। अब कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने भनेपछि पार्टीका छलफल होला, संसदीय दलमा छलफल होला। सभापति आफैले पनि अहिले मलाई इच्छा छैन, अरु पार्टीको अरु नेताअघि बढ्नु भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो झन् राम्रो हो। त्यो भन्नै हुँदैन भन्ने कुरा छैन। चौँथोपटक भइसके म, अहिले हिसाबकिताब पनि मिलेको छैन, म पार्टीको अधिवेशनको जिम्मा लिन्छु भन्न सक्नुहुन्छ।
कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति बन्छ?
ओली सरकारको समीक्षा गर्दा तपाई बढी नै नकरात्मक हुनुभयो भन्छन्। ओली सरकारका राम्रा पक्षहरु छैनन्?
–प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेका काममा मन्त्रालयले गरेको कार्यक्रम, पुल उद्घाटनको कुरा, यहाँनेर यो भयो, त्यहाँ यो भयो भन्ने कुरा खोज्नुभएको हो भने म भन्दिन्छु। पहिलो कुरा, संविधानले निर्दिष्ट गरेको फ्रेमभित्र सरकारले काम गर्छ। त्यसको घेरामा रहन्छ र नियमलाई पालना गर्छ। यो सरकारले ती कुराहरु गरेन, मानेन। सबै भत्कायो। दोस्रो कुरा, ती नियम माने पनि नमाने पनि उसले राम्रोसँग अपरेट गर्छ, गभर्नेन्स् गर्छ, काम गर्छ। रुल्स नमाने पनि धेरै राम्रो काम गरेको छ भन्ने ठाउँ रहन्छ। त्यो पनि गरेन। मैले सरकारबाट धेरै आशा गरेको हुनाले पनि धेरै आक्रोशित देखिएको होला म। ५ वर्षमा स्थायी सरकारले केही न केही डेलिभर गर्छ र नेपालको राजनीति अर्को लेबलमा पुग्छ भन्ने थियो। प्रधानमन्त्री ओली आफूले मात्र पनि सही तरिकाले काम गरिदिनु भएको भए नेपालको राजनीति नै अर्को कोर्समा जान्थ्यो। अर्को फर्म्याटमा जान्थ्यो। तर, उहाँले भताभुङ्ग गरिदिनुभयो। यति ठूलो अवसर पाएर पनि उहाँले केही गर्न सक्नुभएन। मैले उहाँले जादु गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेको थिइनँ।
सरकारलाई नम्बर दिनुपर्दा तपाई कति दिनुहुन्छ?
–म दिन्न। म किन नम्बर दिन्न भने कक्षा १० को परीक्षा दिन आउँदा त्यो प्रश्नपत्र फ्याँकेर कक्षा ८ को परीक्षा दिएर नम्बर आउँछ? दिनुपर्ने परीक्षा नदिएर कक्षा ८ को परीक्षामा सबै गरेको छु भनेर हुन्छ? अहिलेको सरकारले त्यही नै गर्यो। सरकार अन्तै बरालियो।
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा गगन थापाको उम्मेदवारी केमा हो? गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माजस्ता युवाहरू एकै ठाउँमा आउन नसक्ने कारण के हो?
–पार्टीको महाधिवेशनमा केमा लड्ने भन्ने मैले निधो गरिसकेको छैन। म पार्टीका समकालिन नेताहरूसँग छलफलमा छु। युवा साथीहरूसँग छलफल गरेर आफै पार्टी सभापतिमा पो लड्ने कि भन्ने विषयमा पनि छलफलमा छौं। पार्टीको कार्यक्रममा जाँदा मतदाता भएर आउन तम्तयार भएर बसिरहनु भएकाहरुले मलाई पार्टीको महामन्त्रीको रुपमा देख्न चाहन्छौं भन्नुहुन्छ। कतिले सभापतिमा उठ्न हतार नगर्नुहोस् भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। साथीहरूसँग कुरा भइरहेको छ। विश्वप्रकाश शर्मा लगायतसँग मिलेर चुनाव लड्ने, फरक–फरक भएर लड्ने वा प्रतिस्पर्धी नै हुने कुरा समयले निर्धारण गर्दै जान्छ। कतिपय विषयमा हामीसँगै बसेर छलफल गरिरहेका छौं। सँगै बसेर एउटै मोर्चामा लड्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। फरक–फरक लड्नुपर्ने अवस्था पनि आन सक्छ। यो सबै हाम्रो मात्र नियन्त्रणमा छैन। हामीले हाम्रा समर्थक र नेताहरूसँग सरसल्लाह गर्नुपर्छ।
#प्रधानमन्त्री #केपी_शर्मा_ओली #पुष्पकमल_दाहाल_प्रचण्ड #नेपाली_कांग्रेस #गगन_थापा
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत ८, २०७७ १३:४१